Forum serasera malagasy Fitsapam-pahaizana Siansa sy Finoana - Dinika forum.serasera.org
Fitsapam-pahaizana Siansa sy Finoana
Fitohizan'ny hafatra : Fitsapam-pahaizana Siansa sy Finoana
rhaj0 - 14/12/2017 13:08
Eto izany mba tsapaina hoe, hatraiza tokoany ny fahalalantsika ny Siansa (sy Finoana).
Atomboka @ Ioniversa.. Moa fantatrao va re fa ...
Siansa: Toa ny ahoana ny habeNAO io raha miolotra @ Ioniversa??
Finoana: Toa ny ahoana no "namoronan'i G" an'io Ioniversa io, nefany i G @ io dia INOANAO fa toa ny endriKAO??
Miharena - 15/12/2017 11:58
Avaho aloha hoe ny siansa dia fianarana ny zavatra efa voaforona.
Ny finoana dia mikasika ny Mpamorona sy ny fikasaNY ho an'ny voary rehetra noforoniny sy ny zanak'olombelona.
Inona no erana ifandraisany? zana-bondrona ny siansa manoloana ny Fahalalana Fototra tao amin'ny Tompo.
Inona no maha-endriky ny Mpahary ny olombelona? Satria afaka mahazo soa aman-tsara ny famakiana ny voary izy, izany hoe afaka manao siansa.
rhaj0 - 15/12/2017 14:36
Asa k'lou fa nareo Mpino ihany ry Miharena no mieritreritra "forona" forona izany. Ohatra hoe, ireo planeta nasesy ireo angamba izao dia heverinareo ao fa noforonina sy namboarina ary novolavolaina avy t@ fota-mandry, dia nasiana pensée mazika hoe
pouah pouah pouah, miha-ngezà ry kanety, miha-ngezà, ary allez misidina mamonjy ny orbite-nao??
Ny Siansa dia mijery sy mandalina ny "fivoaran'ny tontolo". TSISY "forona" forona izany eo.
rhaj0 - 15/12/2017 18:13
Hita eo @ ilay video izany fa ny haben'ny Ingahy Laksia Lavoahy Lakitehy dia efa ho 100.000 années-lumières, na 950.000.000.000.000.000 km. Ary Ingahy Laksia Andiromeda dia etsy alavitra, efa ho any @ 2.000.000 annees-lumieres avy eo @ ilay Ingahy Lavoahy teo.
Nefa ny habentsika izao, raha be indrindra, dia eo @ 2 metatra, na 0.002 km.
Ka @ Siansa izany dia tena bitika dia bitika Raolona raha miolotra @ Tontolo.
Fa @ Finoana kosa dia, i Rabitika io izany, HONO, no nofinidin'izao Atra izao ho TOA NY ENDRINY, "in our image, in our likeness", na "à notre image, selon notre ressemblance" hozy ny genesisy 1:26 izay.
Ka fanontaniana ny ahy ho an'ny Mpino sy ny Finoany ao :
1- ilay Atra ve, avy any @ tsy hita pesipesenina any, no nanadoboka an-dRAbitika tety an-tany, sa
2- Ilay Atra, avy tety an-tany, toa ny "endrik'i RAbitika", no nanao kopa-tanana dia nanely ireo pilaneta sy galaksia any @ tsy hita pesipesenina any rehetra any??
Miharena - 15/12/2017 20:18
Ny fanahy no olona ary ny fanahy dia mahasehaka ERANA miliara miliara rehefa miasa araka an'Andriamanitra Mpahary.
Jereo ny tantaran'i Botity.
rhaj0 - 15/12/2017 21:25
Raha ny fahazoako an'i Miharena izany, dia mino i Miharena fa :
Ilay Atra (izay fanahy), avy tety an-tany, ary toa ny "endrik'i Rabitika", (izay kely botity) no nanao kopa-tanana, dia nanely ireo pilaneta sy galaksia any @ tsy hita pesipesenina any rehetra any??
endriny - 16/12/2017 06:34
Inona ary no miafina ao ambadikin'ny vatokely o?
Miharena - 16/12/2017 17:37
Manomboka eo amin'ny asan'ny fanahy dia tsy resaka finoana intsony fa hatran'ny fanahy.
Tsy takatry ny siansa ohatra ny fananganana olona maty fa fantatry ny fanahy soa aman-tsara. Tsy finoana izany fa asa ary tsy mahagaga ny Mpahary.
RBNIR - 17/12/2017 05:16
Lehibe marina tokoa raha ny univers,
Fantaro anefa fa nisy nanamboatra io univers io, ary ILAY nanamboatra azy dia tena mitaky fanajana, mitaky fatahorana ary mitaky fanomezamboninahitra HO AZY marina tokoa...
« Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, » (Apokalypsy 14:6)
endriny - 18/12/2017 06:00
Lazainao fa mahenika ny erana an-tapitrisany ny fanahin’ny olona miankina @ Atra. Kay ny ao ambadiky ny vatokely aza tsy hainao akory?
Ka maninona moa ianareo no mampiasa internet sy haino aman-jery isan-karazany? Maninona raha miteny tsotra fotsiny ao an-trano dia ampitain’Atra mivantana amin’ny feo mahery eran’ny tany sy manakoako eny an-danitra ny hafatrareo?
Ity internet ity ange zavatry ny tany e. Sao adinonareo.
Miharena - 18/12/2017 06:33
Tsy mazava loatra ny fanontanianao.
Ny olombelona dia nomena fanahy sy saina fa tsy hoe nanan-tsaina sy fanahy ho azy teny noho ny fivoarana (araka ny fiheveran'ny mpandinika ara-tsiansa izay olombelona mandinika ny voary).
Otri-kery tsy hita pesimpesenina io fanahy sy saina napetraka tao amin'ny olombelona io.
Fa ny tena omem-boninahitra dia ILAY NAHARY ny fanahy sy saina.
Ka ny fanontaniana miverina aminao eto dia hoe : heverinao ve izany fa raha toa ka nisy ny aterineto sy ny sisa dia hilaza ny olombelona hoe tsy vokatry fanahy sy ny saina nomena no nahazoana izany fa entina hanoherana ny Mpahary izy ireny?
Mety marina ny fandinihan'ny mpitarika fivavahana raha milaza hoe entina hanapariahana ny faharatsiana bebe kokoa io aterineto io.
Fa ny tena fitaizana dia hoe : matoa simba ny olona dia noho ny toe-pony ihany. Izany hoe tsy misy idiran'ilay fitaovana io fa ny fampiasana ilay fitaovana sy ilay mpampiasa azy no tena vorika matoa manimba ny maro ny zava-misy ankehitriny.
Ary ny tena loza aza dia ny fanafenana ny marina noho ny fitiavana te-hisitraka faharatsiana haharitra kokoa eto an-tany no tena mampitontongana tanteraka ny zanak'olombelona. Ny fanararaotana etsy sy eroa izay tsy mendrika moa izany dia tsy lazaina intsony.
Fehiny: Raha tsy mifantoka tanteraka amin'ny fahasoavana sy fanasoavana ny olombelona, izany hoe tena miara-miasa tanteraka amin'ILAY MPAHARY AZY hahalala ny tena maha-izy azy avy tsirairay dia tsy ho avotra satria mpiroaroa saina ny tsy manaiky izany ka tsy mahomby na inona na inona no ataony.
RBNIR - 18/12/2017 08:19
Jesosy dia nahay nandeha ambony rano, nefa nampiasa sambo foana ihany IZY.......
rhaj0 - 18/12/2017 12:55
RBNIR Fantaro anefa fa nisy nanamboatra io univers io, ary ILAY nanamboatra azy dia tena mitaky fanajana, mitaky fatahorana ary mitaky fanomezamboninahitra HO AZY marina tokoa...
Ka raha fatra-"mpanaja" an'Azy izany azany ianao ry RBNIR, dia tokony ho fantatrao ny nataoNY. Efa nolazaiNY eraky ny Baiboly io. Ka fantatrao va re ny nataoNY @ izao "famoronana" ny tontolo io, h@ ilay galaksia atsy @ tsy hita pesipesenina??
rhaj0 Finoana: Toa ny ahoana no "namoronan'i G" an'io Ioniversa io, nefany i G @ io dia INOANAO fa toa ny endriKAO??
Raha TSY fantatrao, raha TSY vitanao ny mamaly TSOTRA an'io fanontaniana io, dia "fantaro" fa
- TSY mpanisy "hajany" ny asa vitaNY (ity "fanamboarana" nataoNY) ianao ry RBNIR
- TSY "mpanome voninahitra" Azy, satria TSY mba ankalazainao ary ampahafantarinao @ olona akoriny ity "asa vitaNY"
- ary tena mpanao z'inona AZY mihintsy ianao ry RBNIR aa...
Fa dia lazao eto ry RBNIR, valio eto, ivavaho ary angatahao valiny avy Aminy (izay mangataka dia ameNY), ary ibitsihaNY ao HONO ianao, fa hoe :
ahoana ny nataoNY @ izao "famoronana" ny tontolo io, h@ ilay galaksia atsy @ tsy hita pesipesenina??
Miharena - 19/12/2017 05:53
Ireo fanontanian'i Rhaj0 ireo dia efa voavaly ao anaty Baiboly.
Ny voalohany aloha dia ny TENY no namoronana izao rehetra izao ary io TENY io dia tao amin'Andriamanitra.
TENY = conception
TENY TONGA ZAVATRA NA NOFO no namoronana ireo rehetra hita maso sy miaina rehetra.
Rehefa niasa IZY dia tsy mba notanaNY ho AZY irery fa namorona MPIARA-MIASA IZY dia ireo Anjely marobe sy ireo olombelona marobe izay samy nizaraNY ny ENDRINY.
Ny Anjely no manana anjara asa manamboatra ny erana sy mitana azy aby.
Ny Hery Fototra ao amin'Andriamanitra Mpahary dia hajaina ary tahirizina toy ny anakandriamaso. Io dia ao amin'ny Hazon'Aina manome Fiainana Mandrakizay izay ny Mpahary irery ihany no mikarakara izany. Io dia omena izay maharitra sy mandresy fa tsy omena izay osa satria manjary manaparitaka faharatsiana indray izay osa omena Hazon'Aina.
rhaj0 - 19/12/2017 16:42
mouah ha ha.. dia ny TENY izany HONO no nitsipika, avy tety @ planeta Latera, ary dia "namorona" ny tontolo io, h@ ilay galaksia atsy @ tsy hita pesipesenina.
Toa izao no Irainizeloza rahefa mivanitika @ fahadonendrenanareo re ry Miharena Eritrereto tsara alohan'ny ipetsipetsenana eee... Ny galaksia Andromeda izay akaiky indrindra @ ny La Voie Lactée antsika izao dia atsy @ 18.000.000.000.000.000.000 km.
Fa dia tena mino beuh ry Miharena hoe, mipelipelika fotsiny HONO ny TENY, avy eo anelakelaky ny rano sy lanitra, hozy GEnesisy izay, ary dia namorona ny masoandro/volana, ka h@ galaksia atsy @ io 18.000.000.000.000.000.000 km sy ny an-tapitrisany lavitra koakoa akoriny azany izao TENY izao.
pensée mazikabe-na garabola de Miharena fotsiny io dia mety foana eee...
endriny - 20/12/2017 05:13
Ilazao koa hoe: Jesosy aza tsy nitaingina raoplanina niakatra tany an-danitra
endriny - 20/12/2017 05:14
Taiza tao anaty baiboly indray aza no misy an'izany anjely mitana erana izany? Aza mamorona ho'a fa manjary mitanjaka marina e
rhaj0 - 20/12/2017 13:33
hi hi hi.. ka ireo Anjely (an'i Miharena) anie no mitandrina ireo pilôna FITO izay mampijoro an'izao tontolo izao ee... Inty "porofo" ary be dia be mihintsy ny "vavolombelona" nahita sy nahalala ny @ io.
Dia jereo tsara fa ireo galaksia ao @ kaontin'ny "star", ireo galaksia izay atsy @ tsy hita pesipesenina dia tena mbola ao anatin'ilay barrage (floodgate) izay manakana ny safo-drano.
endriny - 20/12/2017 16:30
Ary roa hoe efa nohidiana io floodgate io. Ny lakile koa efa natelin’ilay anjely. Mety efa notapenan’i Odon sy Rajabaly simenitra be koa io izao a